'Ọjọọ Nwụrụ Anwụ Egwuregwu' Na-enye Anyị Anya na Somefọdụ Groovy Gameplay na New Trailer
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ 'Ọjọọ Nwụrụ Anwụ Egwuregwu' Na-enye Anyị Anya na Somefọdụ Groovy Gameplay na New Trailer
by Trey Hilburn III June 10, 2021 2,233 echiche
Ọjọọ Nwụrụ Anwụ Egwuregwu si Saber Interactive na Boss Team Games ga-apụ ma emechaa n’afọ a, anyị enweghị ike inwekwu obi ụtọ. Anya anyị nwetara egwuregwu ahụ na mbido afọ a bụ nke pụrụ iche nke webatara mkpụrụedemede n'akụkụ ọ bụla Evil dead ihe ndozi. Egwuregwu egwuregwu a na-adọkpụ na-agbaji na nke ahụ. Egwuregwu a nke Bruce Campbell kọọrọ n'onwe ya na-ahụ Ash Williams na ndị enyi na-ewere ihe ndị nwụrụ anwụ na nsonaazụ ndị dị egwu.
Nchịkọta akụkọ maka egwuregwu ahụ dị ka nke a:
Site n'ike mmụọ nsọ dị egwu, ọchị, na omume nke “ọjọ Nwụrụ Anwụ ”eluigwe na ala, ọjọ Nwụrụ Anwụ: Egwuregwu ahụ na-eweta ihe odide kasịnụ site na aha ọnụ na ihe karịrị elu, ahụmịhe jupụtara n'ọgba megide ikike nke ọchịchịrị. Na-arụ ọrụ dị ka otu ìgwè nke ndị lanarịrịnụ, gụnyere Ash, Kelly Maxwell, Pablo Simon Bolivar, Scotty, Lord Arthur na ndị ọzọ, iji lụso ndị nwụrụ anwụ ọgụ ma chụpụ ajọ mmụọ Kandarian Demon. Ma ọ bụ bụrụ Onye Mmụọ Ọjọọ dị ike n'onwe gị, na-eji ike gị nwere iji gbochie ụmụ okorobịa ndị ahụ nwụrụ anwụ na ilo mkpụrụ obi ha!
Nke a yiri otutu Friday nke 13 Egwuregwu. Ọ na-etinye ndị egwuregwu ndụ megide ndị egwuregwu egwu. Ezi vs. Ọ dị njọ. Ọtụtụ dị ka Friday nke 13 Egwuregwu onye a na-elekwa anya na-a attentiona ntị na nkọwa ọ bụla. Jide n'aka na-na-anọ ruo mgbe ọgwụgwụ nke ụgbọala na-adọkpụ dị ka nke ọma. Anyị na-ele anya na onye maara nke ọma villain si Army of Darkness. A nnọọ groovy mgbakwunye na egwuregwu.
Ọjọọ Nwụrụ Anwụ Egwuregwu na-apụta na PC, PlayStation®5, PlayStation®4, Usoro Xbox X | S, Xbox One, na Nintendo Gbanye mgbe e mesịrị n'afọ a.
Gịnị ka unu na-eche banyere gameplay trailer maka Ọjọọ Nwụrụ Anwụ Egwuregwu? Mee ka anyi mara na ngalaba a.
Neil Gaiman na-enye nlegharị anya set nke Netflix ”na-abịanụ The Sandman mmegharị. Lelee ebe a.